Meksika: Notsongaina handray anjara amin’ny mozika Orkestra YouTube ny mpitendry anankiroa. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2009 7:37 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 简体中文, 繁體中文, Português, বাংলা, 日本語, русский, English
Tetika fiaraha-miasa ampiasaina ny gazety ara-tsosialy amin’ny alalan’ny haino an-tsofinan’ny horonantsary YouTube ilay mozika Orkestra YouTube, izany dia sivanin’ny mpitsara ireo mpilalao mozika sy ny mpikirakira hafan’ny YouTube. Ao anatin’ny mozika orkestra natao ho an’ity tetik’asa ity dia vao haingana no notsiponina ireo mandray anjara izay hilalao sombim-peo noforonin’I Tan Dun, mpamorom-peo Sinoa, ary namorona ny feon-kiran’ny horonantsary toy Crouching Tiger, Hidden Dragon sy Hero (ilay tigra mandady, ilay Dragona miafina sy Ilay Mahery fo), mbola izy ihany koa no loharanon’ny kanto-mozika Anterineto N*1 “Eroica” mba ho lalaovin’ny mpitendry mozika miisa 90 avy amin’ny firenena isankarazany, ireo matihanina sy zandriny, any Carnegie Hall ao New York.
Notsongaina ireto mpitendry feo Meksikana handray anjara amin’ny orkestra iraisam-pirenena araka ny voalazan’ny bolongan’I Vivir Mexico [es]. Mpitendry lokanga antsoina hoe Manuel Zogbi ny iray amin’izy ireo avy any an-drenivohitra avaratry Saltillo. Araka ny feon’ny boky mpiseho isan’andro (magazine) antsoina hoe El Manana [es], dia ny iray amin’ny nofinofiny amin’ny mahampitendry mozika azy ny hilalao ao anatin’ny Carnegie Hall:
….Nanomboka tamin’ny faha-10 taonako teo ho eo dia fanaoko ny miresaka hoe: Ho hitanao, fa rehefa lehibe aho dia tiako ny hilalao ao amin’ny Carnegie Hall. Rehefa nandeha ny fotoana, dia toa nanjavona ireo nofinofy, ary ankehitriny dia tsapako fa , ooo oai! Tena afaka niverina ireo nofinofiko taloha ary tanteraka izy ireo ankehitriny.
Entina hankalazana ny fifidianana azy dia handray anjara amin’ny konseritra (concert) ao Monterry, ilay renivohitra onenany ankehitriny I Zogbi.
Kely dia kely ihany ny fantatra momba ilay mpitendry mozika anankiray hafa. Intisamente no anarana entiny amin’ny YouTube, ary araka ny feon’ny boky mpiseho isan’andro El Manana, dia avy any Veracruz hono izy.
Kanefa aloha, tsy sakana velively ho an’ny mpikirakira Meksikana hifandray sy hiarahaba azy amin’ny alalan’ny YouTube ny tsy fisian’ny fomba amantarana mikasika ny mpitendry lokanga. Mitsikera ao anatin’ny fantsona misy azy [es] ny mpikirakira SAME860331:
Fahagagana mahafinaritra tokoa ny ahy rehefa namaky ny gazety fa hoe Meksikana roa no tafiditra ao anatin’ny mozika orkestra YouTube!!! Ny fihetsem-poko voalohany dia ny hafaliako, koa satria afaka mampifandray antsika ny aterineto dia tsara ihany ny miarahaba anareo n’aiza n’aiza misy antsika.
Miaraka ireo Meksikana, dia ao koa ny mpitendry mozika avy any Brezil sy ny anankiray avy any Kolombia handray anjara ao amin’ny Mozika Orkestra youTube..